Degso Webroot Spy Sweeper loogu talagalay Windows
Degso Webroot Spy Sweeper
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (40.12 MB)
Degso Webroot Spy Sweeper,
Barnaamij ay khubaradu ansixiyeen inuu yahay barnaamijka ogaanshaha spyware ee ugu horumarsan, waxaad ka ilaalin kartaa kombiyuutarkaaga Spyware, oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Barnaamijku wuxuu xannibayaa spyware -ka uu aqoonsado ama tirtiro Spyware -ka ku jira nidaamkaaga.Waxaad isla markiiba garan kartaa oo tirtiri kartaa spyware -ka aan la rabin ee ku faafa nidaamkaaga barnaamijyada wadaagista faylka ama sawir kasta oo muusig ama wadaagista codsiyo kala duwan. cusboonaysiinta ka dhanka ah weerarada cusub ee Spyware. Ka sokow in laga ilaaliyo dhammaan spyware -ka ka diiwaangashan keydka xog -ogaalka Spy Sweeper, had iyo jeer feejignaada oo la soco wixii liddi ku ah spyware cusub maalin kasta. Nidaamka cusboonaysiinta waa lacag laaan waana la fuliyaa isla marka la sii daayo noocyada cusub ee spyware. Maxaa ku cusub Barnaamijka:
Ahaanshaha barnaamij ay taageerto Microsoft Windows Vista, kaas oo ah software -ka aadka loo filayo muddooyinkii ugu dambeeyay, waa mid ka mid ah hal -abuurnimadeeda ugu weyn. In kasta oo shirkadaha softiweerka badankoodu ay diyaarinayaan baakadaha ay ku habboon yihiin Vista, Spy Sweeper 5.3 ayaa horeba u daryeelay tan.
Baadhitaan deg -deg ah Baadhitaannada basaasnimada ee internetka ama kombiyuutarkaaga sida ugu fudud oo leh Baadhitaan buuxa iyo xulashooyinka raadinta Ikhtiyaarka ah.
Si loo badbaadiyo waqtiga, Spy Sweeper wuxuu kaloo ku siinayaa qaababka faylasha wax basaasa ee ay goaamisay oo kuu oggolaanaya inaad xannibo.
Waxay samaysaa baaritaano iyo cusboonaysiin waqtiyada aad sheegto.
Waxaad u dejin kartaa derbiga difaaca ee dib loo qaabeeyey si firfircoon ama dadban bogagga aad rabto.
Noocan cusub, waxaad hadda u adeegsan kartaa Spy Sweeper baaritaannada Fayraskaaga.
Waxaad ilaalin kartaa kombiyuutarkaaga iyo codsiyada internetka adiga oo aan wax talaabo ah qaadin.
Waxay had iyo jeer kaa ilaalinaysaa fayrasyo ​​cusub oo leh xog -ururin xooggan iyo cusboonaysiin.
Waxay siisaa difaac aad waxtar u leh Trojans, fayrasyada, spyware iyo gooryaan.
Basaasiin khatar ah oo xanaaq badan ayaa siyaabo kala duwan u qaadsiin kara nidaamkaaga inta aad internetka daalacanayso. Spy Sweeper wuxuu ku siinayaa dammaanad-qaad difaac oo buuxa. Iyada oo leh derbiga difaaca cusub ee awoodda iyo caqliga leh, waxaad baari kartaa oo tirtiri kartaa spyware oo isku dayaya inuu galo nidaamkaaga kahor intaysan xitaa gelin. Haddii kombiyuutarkaagu ku jiro spyware, waad heli kartaa oo tirtiri kartaa iyada oo ay ugu wacan tahay farsamooyinka cilmi -baarista horumarsan ee Spy Sweeper.
Webroot Spy Sweeper Noocyada
Cabirka Faylka: 40.12 MB
Horumar: Webroot Software